खबरदार ! नाच्ने बाहानामा नाङगीन पाइदैन, तिम्रो बैशले माग्या हो भने.......... - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
नाच्ने बाहानामा तिम्रो त्यो बिग्रेको अंग प्रर्दशन नगर । कुरितीको हैन सँस्कृतीको रुप प्रर्दशन गर, यदि तिम्रो बैशले नै मागेको छ भने २ ४ जना भुसतिघ्रे संग सम्पर्क गर तर नेपाली समाजलाई तिरस्कार हुने यस्ता हर्कत नगर ।
कलामा नग्नता पनि हुनसक्छ तर कथाले मागेको खण्डमा मात्रै । के रक्सी पिएर जवानिलाई तताउदै, कामुकता र अश्लिततामा पस्कनु नै नृत्य हो त ? जब कामुकताले सीमा पार गर्छ तब त्यो अश्लिल बन्न पुग्दछ ।
नाच्ने बाहानामा स्टेजमै उनि बौलाइन भन्दापनि फरक नपर्ला । गीतको तालमा आफ्नो अश्लिलता पस्किँदै लगाएको लुगा स्टेजमा नै फुकालनु कति सम्म बैसले पिरोलेको उनलाई। उनीसँगै हाँस्यकलाकार सुलेमान शंकर ‘इक्कु’ पनि नाचिरहेको देख्न सकिन्छ । उनले बिस्तारै आफूले लगाइरहेको लुगा खोल्छिन् र सुलेमान भने ती लुगालाई भुईंबाट झिकेर आफ्नो हातले घुमाउँछन् । यति सम्मकी दुबै नाच्दा नाच्दै स्टेजमा नै चुम्बन समेत गर्छन् ।सोनाम लोछार जस्तो तामाङहरुको ठूलो चाडमा यस्तो हर्कत गर्नुले कहाँ रहला संस्कार र संस्कृतिको पहिचान भन्ने हो भने सिधै सोनाम लोछार जस्तो पबित्र चाड माथि उनले धज्जि उडाइन , बदनाम गरीन ।
अझ यो त दर्शकको अपमान मात्र नभएर समग्र कलाकारको अपमान हो । कला, सीप र इमान्दार भए नाङगो कम्मर लच्काइरहनु पर्दैन । कपडामै काफी हुन्छ । यदि यस्तै हो भने सांस्कृतिक धमाकाको आयोजकले अर्को कार्यक्रममा घाटाको ब्यापार बेहोर्नु पर्नेछ। लुगा फुकाल्नु भनेको पुरै नाङ्गीए बराबर नै हो । नेपालीको बदनाम गर्न कसैलाई छुट छैन । नाच्ने बाहानामा तिम्रो त्यो बिग्रेको अंग प्रर्दशन नगर । कुरितीको हैन सँस्कृतीको रुप प्रर्दशन गर, यदि तिम्रो बैशले नै मागेको छ भने २ /४ जना भुसतिघ्रे संग सम्पर्क गर तर नेपाली समाजलाई तिरस्कार हुने यस्ता हर्कत नगर (यो एक जना दाजुको भनाई फेसबुकबाट साभार गरे किनकि एकदम सहि लाग्यो ।)
मेरो नजरमा यी विल्कुल गलत देखे किन यसरि भाईरस हरु उब्जिन्दै छन । खबरदार समाजमा विकृति फैलालाउन कसैलाई अधिकार छैन । सबै थोक किन्न पाइन्छ तर इज्जत लाखौं करोडौंमा नि किनेर पाइन्न । के नाङ्गो हुँदा सर्बाङै देखाउदा मात्रै यो मान्छे कलाकार हो भनेर चिनिन्छ, पैसामा बिक्ने लाई इज्जत को के मत्लब ? यस्ताले गर्दा दुनियाँ दिदी बहिनी बेइज्जत हुनु पर्छ । अब सारा महिलावादी संघसंस्थाले यस्को बिरोध गर्नैपर्छ ।
बेहोशीमा बलात्कार गरेँ भनेर अपराधीले छुट पाउँछ ?
के जन्म दिने आमालाई बेहोसीमा छिमेकि को श्रीमति भ...
दाहाल ज्यु, ‘तपाई प्रधानमन्त्री की कर अधिकृत ?’
तर एक करोड भन्दा बढी नेपाली ग्राहक भएको दुरसञ्चा...
खबरदार ! नारीको रगतमा होली खेल्न पाइदैन
के यो संविधानमा नारीको जीवनमा पुरुषले मोजमस्ती गर्...
पृथ्वीनारायण शाह नेपालको निर्माता जस्लार्इ व्याख्य...